China Yakajeka uye amber giredhi A Volumetric Flask Ine pasi- mugirazi chimiso kana epurasitiki chimiso Kugadzira uye Fekitori | Huida
Yakajeka uye amber giredhi A Volumetric Flask Ine pasi-mugirazi chimiso kana epurasitiki chimiso
Chigadzirwa Chigadzirwa: Volumetric Flask
1. Kirasi A
2. Nepasi- mugirazi chimiso kana chipurasitiki
Ruvara: Yakajeka uye amber
Volumetric Flask Nhanganyaya
Vhoriyamu vhoriyamu (yekuyera chinu kana akapedza guchu) chidimbu cherabhoritari girazi, mhando yerabhoritari guchu, yakaenzana kuti ive neiri chaiyo vhoriyamu pane imwe tembiricha. Volumetric flasks anoshandiswa kunyatso dzvanya uye kugadzirira kwakajairika mhinduro.
Nezve Volumetric Flask
Volumetric Flask giredhi A., Iine ivhu-mune girazi rinomisa kana chipurasitiki, yakajeka
Kugona kubvumidza (± ml)
Volumetric Flask amber, giredhi A, Iine ivhu-mugirazi chimiso kana chipurasitiki
Usati washandisa bhodhoro revolumetric, macheki maviri anotevera anodiwa.
1. Iyo vhoriyamu ye volumetric flask inoenderana nezviri kudikanwa.
2. Tarisa uone kuti kork yakaomeswa uye haidonhe.
Isa mvura mubhodhoro padyo nemutsetse wekumaka, chivharisa chimiso zvakasimba, uye chirega chimire kwemaminetsi maviri. Tarisa nebepa rakaoma resafa padivi pemusono webhodhoro kuti uone kuti hapana kuburitsa mvura. Kana ikasadonha, chinja plug yacho 180 °, chivhara zvine mutsindo, zvidzore, uye uyedze kuburitsa nenzira iyi. Iyo yekumira yakasimba inofanira kuchengetwa munzvimbo yakachengeteka. Zvinokurudzirwa kusunga tambo mumutsipa webhodhoro kuti isadonhe kana kusanganiswa nezvimwe zvinomisa.
Pashure: Chikoro A Kuyera Pipette Akapedza kudzidza ne zero kumusoro
Zvadaro: lab glassware Volumetric Pipette ine mucherechedzo mumwe
Cheap Lab Glassware Borosilicate Clear Glass Kr ...
Kirasi A Kuyera Pipette Yakapedza kudzidza ne zero a ...
Kudonhedza Bhodhoro Amber kana girazi rakajeka ne groun ...
Mira yakamira hodhi Standard pasi muromo
Laboratory kana kudzidzisa Doro mwenje mini alcoho ...
Filter Funnel (Buchner faneli), ine fritted disc